Umlaza iScorpio: izici, ukwakheka kanye nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi esibhakabhakeni kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinkanyezi. Kuyisethi yezinkanyezi ezikhanyayo ezihlanganise amafomu nokuthi ngemuva kwazo kukhona inganekwane nomlando. Kulokhu, sizokhuluma nge- umlaza i-scorpio. Ungumlaza obonakala esibhakabhakeni futhi useduze nendawo enkabeni yeMilky Way. Kusondele futhi nendiza ye-ecliptic njengezinye izimpawu zezinkanyezi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici, imvelaphi, izinganekwane kanye nokufuna ukwazi kweqoqo lezinkanyezi iScorpio.
2 Umumo nesimo se-constellation Scorpio
3 Izinganekwane ze-Scorpio constellation
4 Incazelo yezinkanyezi nokufuna ukwazi
Ngenye yezinkanyezi ezilula kakhulu ongazithola, noma ngabe usaqala ekubukeni. Kuyinkanyezi yezinkanyezi ezitholakala phakathi kwe-serpentarium nesikwele. Izinkanyezi eziqhakazile kule nkanyezi zidweba isithombe esikhumbula ukwakheka kofezela, yingakho igama layo. Kumele sazi ukuthi i-zodiac yisifunda sendawo yezulu lapho kudlula khona i-ecliptic nalapho singathola khona iplanethi. Leli gama libhekisela eqinisweni lokuthi izinkanyezi amaGreki azibonayo zazilingana nezilwane zangempela noma zasenganekwaneni. Yilapho igama lezodiac livela khona.
Ngaphakathi komlaza iScorpio sithola ezinye izinkanyezi zikhanya kunezinye, njengoba kunjalo cishe kuwo wonke amaqoqo ezinkanyezi. Esimweni esinjalo, inkanyezi ekhanya kakhulu enkanyezini yaziwa ngegama lika-Antares. Yinkanyezi kanambambili ebonakalayo ebhekwa njengenkanyezi ebomvu ebomvu enkulu enobubanzi obuphindwe izikhathi ezingama-300 kunelanga. Kufanele sicabangele ubukhulu bale nkanyezi ngoba ilanga lethu selivele libonakala lilincane.
Inkanyezi yesibili yomlaza iScorpio inobubanzi obuphindwe kabili kuphela belanga. Noma kunjalo, icishe iphindwe izikhathi ezingama-300, ngakho-ke ungayibona naphezu kwebanga. Inani elibonakalayo elibonakalayo lohlelo kanambambili ngu-1,0. Ososayensi bathole iplanethi engaphezulu etholakala cishe ku- cishe iminyaka eyi-12.400 yokukhanya evela eMhlabeni ku-constellio Scorpio. Iplanethi engaphezulu ibuye yaziwe ngegama le-exoplanet futhi ileyo ezungeza noma iyiphi inkanyezi ngaphandle kwelanga lethu.
Ngakho-ke, iyingxenye yezinye izinhlelo zamaplanethi ezihlukile kunezethu. Ukuba khona kwala maplanethi bekusolwa isikhathi eside, yize kungazange kuqale ukutholakala kuze kube yiminyaka yama-90. Ngenxa yobuchwepheshe obuthuthukisiwe namasu okuthola, sekutholakale i-exoplanet eyinkulungwane. I-exoplanet yokuqala eyatholwa izungeza inkanyezi enkulu yokulandelana kwaba yi-51 Pegasi b, eyatholakala ngo-1995 nguMichel Mayor noDidier Queloz we-Geneva Observatory. Le planethi inesisindo esilingana nesikaJupiter. Kusukela lapho sekutholwe amaplanethi angaphezu kwekhulu ngamaqembu ahlukene omhlaba. Amanye ala maplanethi asenkanyezini iScorpio, njengalena esiyishilo ngenhla.
Umumo nesimo se-constellation Scorpio
Inkanyezi ekhanya kakhulu eScorpio ibizwa nge-Qualbu'l-Agrab ngama-Arabhu, i- "Heart of the Scorpion," ngenxa yendawo akuyo. AmaGreki ayibiza ngegama elithandeka kakhulu, i-Antares, okusho ukuthi i-Counter-Mars. Leli gama lingenxa yombala walo obomvu nokuthi i-Mars nalenkanyezi cishe basesibhakabhakeni esisodwa. Kanye engqondweni kuyinkanyezi ebomvu, Kulula kakhulu ukubona izinzipho kanye ne-scorpio stinger. Le nkanyezi ibonakala kuphela ehlobo, ngisho nakwezinye izindawo eningizimu ayiphelele.
Le nkanyezi inenani elikhulu lezinkanyezi kanti ezingama-30 ezigqame kakhulu yilezi ezilandelayo:
I-Antares: Njengoba sishilo ngaphambili, iyinkanyezi emaphakathi futhi inombala obomvu ngobubanzi obukhulu kakhulu kunelanga.
I-Akrab: Yaziwa nangokuthi igama likaGrafias futhi umbala wayo umbala omhlophe oluhlaza okwesibhakabhaka.
Dschubba: Le nkanyezi inombala omhlophe okwesibhakabhaka futhi itholakala ngaphambili kofezela.
UShaula: yinkanyezi etholakala endlebeni kofezela futhi ephambi kwenye inkanyezi eyaziwa ngegama leLesath.
I-Twill: Itholakala eminyakeni engu-190 ekhanyayo evela kwiplanethi yethu futhi igama layo livela eMesopotamiya.
Izinganekwane ze-Scorpio constellation
Vele, i-constellation kufanele ihambisane nenganekwane yayo. Ngokwale nsumansumane, ukuze ashade noMerope, indodakazi yenkosi, umzingeli onamava u-Orion kwakudingeka akhulule isiqhingi saseChios kuzo zonke izilwane zasendle ezikhona. Ibona ukuthi ayikwazi ukuyithola, inkosi yawumisa umshado. U-Orion, uthukuthele, waqala ukubulala zonke izilwane zasendle emhlabeni. Lokhu kwenza uGaia, unkulunkulukazi woMhlaba, wakhungatheka. Ukuvimbela lokhu, wathumela ufezela omncane kodwa oyingozi kakhulu ukuvimbela u-Orion ekufezeni injongo yawo.
Naphezu kwalokhu, u-Arthemisi, unkulunkulukazi wokuzingela, wayemthanda kakhulu u-Orion futhi wayefuna ukumvikela kuze kube sekupheleni. Ngale ndlela, wakwazi ukuxazulula ukungqubuzana ngendlela elula. Wabeka ngamunye wabo ohlangothini oluhlukile lwesibhakabhaka. Ngakho-ke, i-Orion nofezela bakude kakhulu komunye nomunye. Kukhulu kakhulu ukuthi bahlukene, ukuthi laba bobabili abakwazi ukubonwa ngasikhathi sinye.
Incazelo yezinkanyezi nokufuna ukwazi
Ngokuqondene nencazelo yezinkanyezi, abantu abazalwa ngaphansi kwesibonakaliso seScorpio bagcwele ukuzethemba futhi banezinkolelo eziqinile. Ngomdlandla ongaka, bazoba nomona baziphindiselele. Bathembekile kakhulu futhi baqotho, ngakho-ke yize kwesinye isikhathi bezwa ubuhlungu, imibono yabo ingaba lusizo olukhulu. Isici seScorpio ngamanzi.
Ake sibone ukuthi yiziphi izifiso eziyinhloko zalesi siqoqana:
Yiqoqo lezinkanyezi elinenani elikhulu lezinkanyezi kunalokho elinakho ubukhulu obungaphansi kuka-15.
Izikhathi eziningi ihlangana nenyanga yize ikhona eningizimu. Ngale ndlela, iyakwazi ukunikela ngombukiso owaziswa kakhulu yilabo abazinikela ekuthwebuleni izithombe zezulu.
Kungeqembu lezinkanyezi ezikhethiwe ezisatshalaliswa izinkanyezi zalo ezihambisana negama lazo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-constellation ye-scorpio nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza i-Scorpio